Faalo xasaasiya :-Xil iyo derejo yaa mudan?. | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
Faalo xasaasiya :-Xil iyo derejo yaa mudan?.
23 August 2012 Moment Media Group – Waxey maalmahan dheguhu maqlayeen yididiilo qaran iyo neecaaw xorriyadeed. Waxaa soo ifbaxaya ifafaale nabadeed iyo dib u soo kabasho inoo muujineysa muuqaal dowladnimo, taasi oo uu qof walba oo damiir waddaniyadeed lihi uu ku soo dhoweynayo caleemo qoyan iyo qalbi saafi ah.
Muqdisho beryahan, waxey la ciir ciireysaa oo gidaar kasta kaaga muuqanaya sawirrada in ka badan 50 musharrax oo u wada taagan in ay qabtaan hoggaanka dalka gaar ahaan xilka madaxweynanimo ee jumhuuriyadda Soomaaliya, iyaga oo uu damacoodu wada yahay isu tanaasulid la’aan oraneysa ” keligey baa wax ah, cid iga mudanina ma jirto !!!”.
Is weydiintu waxey tahay, waa kuma midka aysan bulshadu dooneyn ee ay diidan tahay?, abwaan C/dhuux oo farta ku sii fiiqaya ayaa maansadiisa ku yiri:-
Inta gaaja daraadeed
Bulshadu waxey dooneysaa oo ay daneyneysaa weliba si aan kala har laheyn u dooraneysaa shakhsiga leh 10ka astaamood ee hoos kaaga muuqata:-
2. Dar allee nin daacad ah
Ayaa darajo mudan
Aan Ooyee Albaabka ii Xira: Sh. Sharif, Qanyare, Xaaf… Loolanka Muqdisho iyo Laacib Sakiin? Galaafadka Galeydh+Gurashada Jawaari+Gariirka Gaas